ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု - 9style
Home/ကြားသိရသမှ/ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု
Thi Ha July 9, 2019
နေပြည်တော်သမီးလေးအမှု.ထက် အဆ ပေါင်းများစွာဆိုးဝါး၇က်စက်တဲ. မင်္ဂလာဒုံက သက်ငယ်မုဒိမ်းကျင်.ခံ၇ပြီး၇က်စက်စွာအသတ်ခံ၇တဲ.သမီးငယ် မဇာခြည်ဖြိုး အသက် ၅ နှစ်ပါ၊၊ အခု ၆ လကျော်ကြာမြင်.လာသည်.တိုင် တ၇ားခံမပေါ်သေးပါ၊၊ ပြည်သူတွေက သိ ပြည်သူတွေက အော်မှ အလုပ်ထလုပ်ကြတဲ. ၇ဲတွေ၇ှိတဲ. ဒီနိုင်ငံမှာ သမီးလေးအမှု.ကတော့ လူမသိ သူမသိ တိမ်မြှုပ်နေပါပြီ၊၊
ဘယ်လိုပဲတိမ်မြှုပ်နေပါစေ မင်္ဂလာဒုံသားမှန်သမျှ ဒီသမီးလေးအကြောင်းတွေးမိတိုင်း တောက် ခေါက်နေကြအုန်းမှာပါ၊၊ နောက်ဖြစ်လေ၇ာဘ၀ ဒီနိုင်ငံ ဒီလို၇ဲတွေ၇ှိတဲ. အ၇ပ်မှာ လူလာမဖြစ်ပါစေနဲ.သမီးငယ်လေးေ၇….သမီးလေးကို ၇က်စက်စွာ လုပ်သွားတဲ.ကောင်လည်းအ သေဆိုးနဲ.သေပါစေလို. ဆုတောင်းပါတယ်၊၊
ကျနော်တို.လုပ်နိုင်တာသည် ခုလို ပို.စ်ကို ဒီသမီးလေးအတွက် ခဏ ခဏတင်ပေး၇ုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ အဲ.တော့ တစ်ယောက်တစ်လက် Share ကြပါ၊၊ လူများများဖတ်မိဖို.အေ၇းကြီးပါတယ်၊၊ ကြာ၇င်မေ.ပျောက်ပီး ဒီအတိုင်းမဖြစ်၇အောင် မင်္ဂလာဒုံမှာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်၇ှိခဲ.တယ်ဆိုတာ လူတွေသိအောင် Share ပေးကြပါ၊၊
နပွေညျတျောသမီးလေးအမှု.ထကျ အဆ ပေါငျးမြားစှာဆိုးဝါး၇ကျစကျတဲ. မင်ျဂလာဒုံက သကျငယျမုဒိမျးကငျြ.ခံ၇ပွီး၇ကျစကျစှာအသတျခံ၇တဲ.သမီးငယျ မဇာခွညျဖွိုး အသကျ ၅ နှဈပါ၊၊ အခု ၆ လကြျောကွာမွငျ.လာသညျ.တိုငျ တရားခံမပျေါသေးပါ၊၊ ပွညျသူတှကေ သိ ပွညျသူတှကေ အျောမှ အလုပျထလုပျကွတဲ. ရဲတှေ၇ှိတဲ. ဒီနိုငျငံမှာ သမီးလေးအမှု.ကတော့ လူမသိ သူမသိ တိမျမွှုပျနပေါပွီ၊၊
ဘယျလိုပဲတိမျမွှုပျနပေါစေ မင်ျဂလာဒုံသားမှနျသမြှ ဒီသမီးလေးအကွောငျးတှေးမိတိုငျး တောကျ ခေါကျနကွေအုနျးမှာပါ၊၊ နောကျဖွဈလရောဘ၀ ဒီနိုငျငံ ဒီလိုရဲတှေ၇ှိတဲ. အ၇ပျမှာ လူလာမဖွဈပါစနေဲ.သမီးငယျလေးရေ….သမီးလေးကို ၇ကျစကျစှာ လုပျသှားတဲ.ကောငျလညျးအ သဆေိုးနဲ.သပေါစလေို. ဆုတောငျးပါတယျ၊၊
ကနြျောတို.လုပျနိုငျတာသညျ ခုလို ပို.ဈကို ဒီသမီးလေးအတှကျ ခဏ ခဏတငျပေးရုံကလှဲပွီးဘာမှမတတျနိုငျပါဘူးဗြာ အဲ.တော့ တဈယောကျတဈလကျ Share ကွပါ၊၊ လူမြားမြားဖတျမိဖို.အရေးကွီးပါတယျ၊၊ ကွာ၇ငျမေ.ပြောကျပီး ဒီအတိုငျးမဖွဈ၇အောငျ မင်ျဂလာဒုံမှာ ဒီလိုအဖွဈအပကျြ၇ှိခဲ.တယျဆိုတာ လူတှသေိအောငျ Share ပေးကွပါ၊၊Credit – celefamily
ဝေဠုကျော်နဲ့ပြေလည်မှုရသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုအပေါ် သင်းသင်းဖြေရှင်း